Adobe manavao ny Photoshop miaraka amina Selection lohahevitra nohatsaraina | Famoronana an-tserasera
Ora vitsy lasa izay Adobe dia nanambara fanavaozana lehibe ny katalaogin'ny programa lehibe voafintina ambanin'ny Creative Cloud. Amin'ity lahatsoratra ity dia hiresaka momba ireo tonga amin'ny Photoshop amin'ny kinova desktop izy ireo.
Araka ny voalazan'i Adobe tsara, ity no endri-javatra lehibe indrindra nalaina tamin'ny Adobe MAX tamin'ny fihaonambe 2019. Anisan'ireo fiasa ireo ny manonona ny fanatsarana ny "majika" amin'ny fianarana milina avy amin'ny Adobe Sensei ary fanatsarana ny fizotran'asa hanakanana ny fotoana famokarana. Ataovy.
Adobe dia nametraka ny hena rehetra amin'ny grill mba hanatsarana tsara ny asan'ny Selection subject hanatsara be ny valin'ny safidy mandeha ho azy.
Afaka hitantsika ny fihatsarana lehibe amin'ity sary nifandimby ity mba ho hitanao ny fomba fiasa tamin'ny taona 2019 ary manao ahoana izao; raha ny marina dia nanatri-maso an'ity fifantenana ity tao amin'ny fakan-tsary lehibe Adobe Photoshop navoaka tamin'ny Android sy iOS Tamin'ny herinandro lasa.
Raha ny marina dia nandinika manokana ny antsipirian'ny volo amin'ny sary saripika ary izany matetika no soavaly ady hiadiana rehefa te-hisafidy ny ambadiky ny sary isika.
Ny iray amin'ireo tsara indrindra amin'ny Photoshop dia ao amin'ny fanandramana mpampiasa Adobe Camera Raw. Izy io dia ao amin'ny interface interface izay maka tahaka ny maoderina indrindra an'ny Lightroom izay raisin'ny Camera Raw ankehitriny. Miaraka amin'ny pikantsary omena anao dia afaka mahazo hevitra haingana momba ireo fanatsarana sary amin'ny slider ianao sy maro hafa.
Ary tsy tokony hanao tsinontsinona antsika koa isika endri-javatra fampahavitrihana mandeha ho azy vaovao an'ny Adobe Fonts rehefa nosokafana ny antontan-taratasy iray. Ny fahasamihafana lehibe dia miankina amin'ny hoe rehefa manokatra antontan-taratasy isika izao ary tsy hita ireo endritsoratra ireo, dia mitady azy ireo avy hatrany ny Adobe Photoshop mba tsy hangataka antsika hanomboka ity fomba ity. Ankehitriny dia mandeha ho azy ny zava-drehetra.
Farany manana zava-baovao roa hafa: lamina azo soloina sy famantarana famantarana miaraka amin'ny Font Match. Ny voalohany dia sarotra loatra ny milaza izay ataony, ary ny faharoa dia afaka mamantatra io loharano io.
Ireo dia ny fiasa vaovao lehibe indrindra amin'ny Photoshop ho an'ny kinova desktop. Hamoaka ny vaovao tsy ho ela izahay ho an'ny kinova desktop sy ny sisa Creative Cloud, koa aza diso anjara!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Adobe dia manavao ny Photoshop miaraka amin'ny vaovao manandanja ho an'ny kinova desktop